Pristiq - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Pristiq
Pristiq ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Pristiqဟာselective serotoninနဲ့norepinephrine reuptake inhibitors(SNRIs)လို့ခေါ်တဲ့ဆေးအုပ်စုထဲမှာပါဝင်တဲ့စိတ်ကျရောဂါကုဆေးတစ်မျုးဖြစ်ပါတယ်။Desvenlafaxineဟာစိတ်ကျရောဂါခံစားနေရတဲ့လူတွေရဲ့ဦးနှောက်ထဲမှာမညီမမျှဖြစ်နေတဲ့ဓါတ်ပစ္စည်းတွေကိုထိန်းညှိပေးပါတယ်။
Pristiqကိုသင့်ဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းတိတိကျကျသုံးပါ။ ဆေးညွှန်းမှာပါတဲ့ညွှန်ကြားချက်အားလုံးကိုလိုက်နာပါ။ ယခုဆေးကိုပမာဏတိုးသောက်ခြင်း၊လျှော့သောက်ခြင်းနဲ့ညွှန်ကြားထားသည်ထက်အချိန်ပိုကြာအောင်သောက်ခြင်းများမပြုလုပ်ပါနဲ့။
ဆေးအာနိသင်ကြာကြာခံအောင်လုပ်ထားတဲ့ဆေးပြားတွေကိုအမှုန့်မချေပါနဲ့။ ဝါးမစားပါနဲ့။ မချိုးဖဲ့ပါနဲ့။ ဆေးကိုတစ်လုံးလုံးသောက်ပါ။
သင့်ရောဂါလက္ခဏာတွေသက်သာဖို့ရက်သတ္တပတ်အတော်ကြာနိုင်ပါတယ်။ ဆေးကိုညွှန်ကြားထားတဲ့အတိုင်းဆက်သောက်ပါ။ သင့်ရောဂါလက္ခဏာတွေမသက်သာပါကဆရာဝန်ကိုပြောပြပါ။
Pristiqဆေးသောက်တာကိုရုတ်တရက်မရပ်လိုက်ပါနဲ့။ သင့်မှာဆေးဖြတ်ခြင်းရဲ့လက္ခဏာတွေရနိုင်ပါတယ်။ ဆေးသုံးတာကိုဘေးကင်းကင်းနဲ့ဘယ်လိုရပ်ရမလဲဆိုတာကိုသင့်ဆရာဝန်ကိုမေးမြန်းပါ။
Pristiqကိုအခန်းအပူချိန်မှာထားတာအကောင်းဆုံးပါ။ တိုက်ရိုက်နေရောင်ထိတွေ့နိုင်သောနေရာနှင့်စိုစွတ်နေတဲ့နေရာတွေကနေဝေးဝေးထားပါ။ ဆေးအာနိသင်မပျက်အောင်ဆေးကိုရေချိုးခန်းနဲ့ရေခဲသေတ္တာထဲကိုမထည့်ထားသင့်ပါ။Pristiqဆေးအမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီးဆေးထိန်းသိမ်းဖို့လိုအပ်ချက်များလည်းကွာခြားနိုင်ပါတယ်။ ဆေးကိုသိမ်းဆည်းဖို့အတွက်ဆေးထုပ်ပေါ်မှာရှိတဲ့ညွှန်ကြားချက်များကိုဖတ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုလည်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ ကလေးတွေနဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေဘေးကင်းဖို့အတွက်ဆေးကိုသူတို့နဲ့ဝေးရာမှာထားသင့်ပါတယ်။
Pristiqကိုအိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေဆေးချတာမျိုးကိုမလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါဒါမှမဟုတ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာစနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကိုစနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Pristiq အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
သင်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့၁၄ရက်အတွင်းMAO inhibitorဆေးတစ်မျိုးမျိုးကိုသုံးထားပါကPristiqဆေးကိုမသုံးပါနဲ့။ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။MAO inhibitors ဆေးတွေကတော့isocarboxazid,phenelzine,rasagiline,selegiline,နဲ့ tranylcypromineတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ သင်ယခုဆေးသုံးတာကိုရပ်ပြီးMAOIဆေးစမသုံးခင်အနည်းဆုံးနဲ့၇ရက်စောင့်ရပါမယ်။
အချို့လူငယ်တွေမှာစိတ်ကျရောဂါကုဆေးတစ်မျိုးကိုပထမဆုံးအကြိမ်သောက်တဲ့အခါမိမိကိုယ်ကိုသတ်သေဖို့အတွေးတွေတွေးတတ်ကြပါတယ်။ သင်Pristiqဆေးကိုသုံးနေတဲ့အခါသင့်ရောဂါအခြေအနေတိုးတက်မှုကိုဆရာဝန်အနေနဲ့ပုံမှန်စစ်ဆေးဖို့လိုပါတယ်။ သင်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေသို့မဟုတ်သင့်ကိုစောင့်ရှောက်တဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်းသင့်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေပြောင်းလဲမှုအပေါ်ကိုအမြဲသတိထားနေသင့်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Pristiq ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
ယခုဆေးဝါးကိုကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်နှင့်ကလေးနို့တိုက်နေချိန်တွင်အသုံးပြုလျှင်ဆိုးကျိုးများရှိမရှိကိုဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်အတွက်လုံလောက်သောလေ့လာစမ်းသပ်ချက်များမရှိပါ။ ဆေးမသောက်သုံးမီတွင်ဖြစ်နိုင်ချေကောင်းကျိုးများနှင့်ဆိုးကျိုးများအားလုံးကိုချိန်ဆနိုင်ရန်အတွက်သင့်ရဲ့ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပါ။ အမေရိကန်နိုင်ငံအစားအသောက်နဲ့ဆေးဝါးစီမံကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့(FDA)ကPristiq ကိုကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်ဆိုးကျိုးရနိုင်ခြေအဆင့်Cလို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
Pristiq ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
ဘယ်ဆေးတွေက Pristiq နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Pristiqကသင်လက်ရှိသောက်နေတဲ့အခြားဆေးတွေနဲ့ဓါတ်ပြုပြီးဆေးရဲ့ထိရောက်မှုနဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရနိုင်ခြေကိုပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကိုလုပ်ထားပြီး(စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊မညွှန်ကြားဘဲသောက်သုံးနေတာတွေ၊သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်)ဆရာဝန်ဒါမှမဟုတ်ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုအမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကိုဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲသောက်သုံးခြင်း၊ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Pristiq နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Pristiq နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Pristiqဟာသင့်ရဲ့နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုပိုဆိုးသွားစေတာဒါမှမဟုတ်ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်သင့်ရဲ့လက်ရှိကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကိုသင့်ရဲ့ဆရာဝန်ဒါမှမဟုတ်ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုအသိပေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Pristiq ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Pristiqဆေးကိုနေ့တိုင်းအချိန်တစ်ခုမှာပုံသေထားပြီးသောက်သင့်ပါတယ်။ ဆေးပြားတွေကိုအရည်တစ်မျိုးမျိုးနဲ့တစ်လုံးလုံးသောက်ရပါမယ်။ ဆေးကိုချိုးဖဲ့ခြင်း၊အမှုန့်ချေခြင်း၊ဝါးစားခြင်းနဲ့အရည်ဖျော်သောက်ခြင်းများမလုပ်ပါနဲ့။
ကလေးတွေအတွက် Pristiq ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ကလေးလူနာတွေအတွက်သောက်ရမယ့်ဆေးပမာဏကိုသတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိပါ။ ယခုဆေးဟာသင့်ကလေးအတွက်ဘေးမကင်းနိုင်ပါဘူး။ ဆေးကိုမသုံးခင်ဆေးကြောင့်အန္တရာယ်ရှိမရှိကိုကောင်းကောင်းနားလည်ထားဖို့အမြဲတမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါကဆရာဝန်သို့မဟုတ်ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Desvenlafaxine succinate ၅၀မီလီဂရမ်ပါဝင်ပြီးဆေးအာနိသင်ကြာရှည်ခံအောင်လုပ်ထားသောဆေးပြားပုံစံ
Pristiqဆေးကိုသောက်ဖို့လွတ်သွားခဲ့ပါက(မေ့ခဲ့ပါက)သတိရတဲ့အချိန်မှာအမြန်ဆုံးသောက်ပါ။ သို့သော်လည်းနောက်တစ်ကြိမ်ဆေးသောက်ရမယ့်အချိန်နဲ့နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကိုကျော်ပြီးပုံမှန်အချိန်မှာပဲသောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကိုနှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
Pristiq®. http://www.rxlist.com/pristiq-drug.html. Accessed August 7, 2017